Ardada Al-Azharskolan “Baroortu orgiga ka weyn” | Somaliska
Ardada Al-Azharskolan “Baroortu orgiga ka weyn”
Isbuucaan waxaa doodweyn ka dhalatay iskuulka Muslimiinta Al-Azharskolan ee ku yaala xaafada Vällingby ee Stockholm ka dib markii ay soo baxday in ardada loo kala qeybiyo gabdho iyo wiilal casharada isboortiga. Hay’ada la socodka iskuulada (Skolinspektionen) ayaa ogolaatay arintaan balse siyaasiyiinta ayaa aad uga carooday, iyadoo wasiirka waxbarashada Gustav Fridolin uu sheegay in uu sharciga wax ka badali doono.
Wariyaasha booqasho ku tagay iskuulka oo wareystay ardada oo inta badan Soomaali ah, ayay u sheegeen in siyaasiyiinta ay shaqo la’aan haysato oo ay ku mashquulayaan arimo aan muhiim ahayn. Ardada ayaa ka hadlay in ay aad ugu faraxsanyihiin in ay kala qeybsanaadaan xiliga isboortiga. Qaasatan gabdhaha ayaa sheegay in ay arintaasi door-bidayaan. Isla markaana ay wiilasha la wadaagaan fasalada kale.
“Waxaa jira waxyaabo badan oo mowduucyo laga qori karo oo ay siyaasiyiintu ku mashquuli karaan. Arintaani waa doqonimo. Haddii ardada inta badan ay sidaan doonayaan ma ahan in lagu qasbo in ay joojiyaan” ayay tiri Hamdi Jimale oo ka mid ah ardada.
Iskuulada Muslimiinta Sweden ayaa sanadihii dambe waxaa lagu haayay baaritaan iyo cadaadis badan oo lagu doonayo in ay wax ka badalaan qaabka ay ardada wax u baraan. Iyadoo siyaasiyiinta qaarkood ay qabaan in guud ahaan la mamnuucyo iskuuladaan. Soomaalidu waxay maahmaahdaa “baroordu orgiga ka weyn” marka qeylo dhaanta siyaasiyiintu kuma saabsana casharada isboortiga ee waxay la xiriirtaa naceybka guud ahaan ay u qabaan iskuulada Islaamiga ah.
Ragg u dhashay qowmiyada Romada oo loo diiday in laga iibiyo kaffe
Magangalyo doon kufsi iyo dhaawac isugu geystay Boden
Sweden oo noqotay wadanka sadexaad ee ugu maciishad qaalisan Europe.
sanadahaan dambe waxaa soo badanaya cadaadiska lagu haayo soo galootiga hadey ahaan laheyd xubnaha baarlamaan iyo dowladaba ka tirsan iyo hadii ey ahaan laheyd iskuul islaamiyaba waxaa moodaa wadanka in uu cunsuriga ka awood batay xisbiyada kale. soo galootiga waxaa laga rabaa feejignaan shaqo hufan dadkan kuma rabaan lkin sharciga ma dhaafi karaan hadii shaqadooda hufan tahay cidna sooma fara gelin karto
Iyaga hala waydiiyo maxay u kala sooceen ISKOOLADA CIYAALKA ADHD qaba ama DHIMIRKA la’a iyo kuwa caadigaa , illeen kuwaa ADHD qabaa ma jecla in la takooree !!
Waryaada waxbaa la arkay ” Naga raali noqon mayaan kuwaan iyaga ah
September 3, 2016 at 16:48
Luul, abaayo waa sidaa sheegtay feejignaan iyo hufnaan haddaa kula shaqeeso waa caynami ama waa ka nabad geli. Laakiin dadkeenan soo galootiga ah ayaanba fahamsanayn sida la inoogu taagan yahay iyo sida aynaan u dareensanayn
nuurtomacalin12 @hotmail. com says:
Masha Allah waa arin fiican ayaad sameyseen ee Allah ha idin xifdiyo ardayey shartoodana Allah ayaan ka magengaleynaa insha Allah aamiin Yaa Allah
Askari Mvulan says:
waa maxay dadkan oo cunsuriyiinta ah oo sidaas sameeyey